काठमाडौँ । जाडोमा जब दिन छोटो हुन थाल्छ, घामबाट मिल्ने भिटामिन डीको कमी हुन थालछ । शरीरमा भिटामिन डीको अहम् भूमिका छ । घामको अभावमा हामीले भिटामिन डीको चक्की लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
भिटामिन डी२ र डी३ कुनै पनि औषधिपसलमा डाक्टरको सिफारिसविना किन्न सकिन्छ । भिटामिन डीलाई चमत्कारी भिटामिन भनिन्छ । यसे हामीलाई रोगबाट बचाउँछ । थकान, मांसपेशीको कमजोरी, हड्डीमा हुने समस्या र डिप्रेसनबाट भिटामिनले बचाउँछ ।
यसे क्यान्सर र उमेर बढ्दैजाँदा देखा पर्ने समस्याबाट पनि बचाउने अनुसन्धाताहरु बताउँछन् ।
हाम्रो हड्डी बलियो हुन भिटामिन डी अत्यन्त आवश्यक छ । यसले हड्डीमा क्याल्सियम र फस्फेटलाई मिलाएर राख्छ । जसको शरीरमा भिटामिन डीको कमी छ, उसलाई भिटामिन डीको चक्की खाने सल्लाह दिइन्छ ।
बेलायतका करीब २० प्रतिशत मानिस भिटामिन डीको चक्की खाने गर्छन् । तर, भिटामिन डीले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि प्रदान गर्छ भन्ने जस्ता केही गलत धारणा पनि छन् ।
यसको नाम भिटामिन डी भए पनि बास्तवमा यो भिटामिन नभई हार्मोन हो । यसले शरीरलाई क्याल्सियम पचाउन मद्दत गर्छ । यदि धेरै तेलवाला माछा खान छोड्ने हो भने भिटामिन डी पाउने अरु कुनै पनि स्रोत छैन । जब घामको अल्ट्राभायोलेट किरण हाम्रो शरीरमा पर्छ, तब शरीरमा रहेको कोलस्ट्रोलबाट भिटामिन डी बन्न सुरु हुन्छ ।
भिटामिन डी३ माछालगायत केही अन्य जनावरमा पाइन्छ । जब घामको किरण हाम्रो छालामा पर्छ, तब बन्ने यही भिटामिन डी३ नै हो । भिटामिन डी२ चाहिँ च्याउमा पाइन्छ ।
मानिसलाई दिनहुँ १० माइक्रोग्राम भिटामिन डीको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । अमेरिकामा दूध, ब्रेकफास्ट, अन्न, दही, जुस आदिमा भिटामिन डी मिलाएर बेचिन्छ ।
भिटामिन डीको कमीले हड्डीको डेन्सिटी कम हुन्छ । यसबाट रिकेट्स नामक रोग विशेषगरी नवजात शिशुलाई लाग्न सक्छ । अन्य मानिसलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ ।
भिटामिन डीको कमीले मांसपेशी कमजोर हुन्छ, धेरै थकाइ लाग्छ । भिटामिनको कमीले शरीरमा तागतको कमी हुन्छ । यसको कमीले अन्य कीटाणुले पनि शरीरलाई छिटै आक्रमण गर्न सक्छ । हड्डी बढ्न र बलियो हुन भिटामिन डीको अहम् भूमिका छ ।
अचेल मानिसहरु कार्यालयीय कामका कारण घाममा बस्न त्यति पाउँदैनन् र यसले गर्दा हड्डी करकर खाने, हड्डी कमजोर भई थोरै ठेस लाग्दा पनि भाँच्चिने आदि हुन्छ ।
भिटामिन डीले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भने पनि यो अहिले सम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
भिटामिन डीको कमीले बढ्छ मुटुको रोग र डायबिटिज
हाम्रो शरीरको लागि भिटामिन डी अत्यन्त आवश्यक छ । घामको किरण भिटामिन डीको सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । तर, जो घाममा पटक्कै रहँदैनन्, अथवा कम रहन्छन्, तिनीहरुको शरीरमा भिटामिन
राउटे बालबालिकालाई भिटामिन खुवाइयो
दुल्लु। सरकारले अभियानका रुपमा हरेक वर्ष बालबालिकालाई खुवाउँदै आएको भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल तथा जुकाको औषधि यस वर्ष राउटे समुदायका बालबालिकालाई पनि खुवाइएको छ । समुदायका ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका ३५ बालबालिकालाई
मुलुकभरि आज भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै
काठमाडौँ । मुलुकभरी आज भिटामिन ‘ए’ खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २७९ वटा बुथमा ५५८ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाइएको छ । भिटामिन 'ए'
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बुथमा लिएर जाने कि ? कात्तिक १४ र १५ गते भिटामिन ए खुवाइने
काठमाडौँ । शिशु जन्मेको छ महीना पुग्यो ? अथवा पाँच वर्षमुनिको छ ? छ भने भोलि पायक पर्ने ‘बुथ’मा लिएर जाने तयारी गर्नुहोला । मतदान गर्न होइन नि बुथमा ! आफ्ना